Ị nọ ebe a: Home / Archives maka karama akpụkpọ anụ
Philippines - N'ọtụtụ ụlọ, ọ na-abụkarị ọchịchịrị n'ụbọchị, ma e wezụga obere ray nke ìhè anyanwụ nke na-abanye n'ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ. Eletrik, ọ bụrụ na ọ dị, dị oke ọnụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole pụrụ ọbụna inye ya na mgbe ha nwere ike, ọ na-abụkarị ihe na-efu nri. Ugbu a, onye obula nwere ike inweta ìhè anyanwụ n'ehihie.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ngwá ọkụ Tagged With: akpụkpọ anụ, Philippines